Bulshada Rayidka ah oo Madaxweyne Gaas usoo jeedisay in uu soo xulo gudiga khilaafaadka Barlamanka Cusub. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Bulshada Rayidka ah oo Madaxweyne Gaas usoo jeedisay in uu soo xulo gudiga khilaafaadka Barlamanka Cusub.
Bulshada Rayidka ah oo Madaxweyne Gaas usoo jeedisay in uu soo xulo gudiga khilaafaadka Barlamanka Cusub.
November 29, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garoowe (HM):- Bulshada Rayidka ah ee Puntland ayaa war-murtiyeed kasoo saartay xubnaha gudiga khilafaadka barlamaanka cusub ee 2019ka .
Iyadoo aanu wali magacabin Madaxweyne Cabdiwli Maxamed Cali Xubnaha xalinta khilafaad barlamaanka Puntland ee sanadka 2019ka badelay barlamaankii hore ayaa waxaa si adag uga hadlay Madaxda Bulshada rayidka ah ee Puntland.
Gudiyada Hay,adda daneyaasha aan dowliga ahayn ee Puntland (PUNSAA) ayaa kulan ay Garoowe kuyesheen waxaa ay kasoo sareen war-murtiyeed ay dowladda kagala hadlayaan dedejinta xubnaha xalinta khilafaadka golaha cusub ee wakiiladda Puntland.
Gudoomiyaha PUNSAA Faisal Axmed Warsame oo warfidiyenka u jeediyey wixii kasoo baxay kulan ayaa sheegay in Madaxweyne Gaas looga fadhiyo xubno dadka u dhex ah isla markaana hagi kara howlaha bulshada ay u qabanayaan.
Gudoomiyuhu waxaa uu xusay in ay muhiim tahay in qorshaha magacabista lagu daro qaybta haweenka ee xubnaha xalinta khilafaadk.
Ugu danbayntiina Madaxda PUNSAA waxaa ay Madaxweynaha iyo Musharixiinta kaleba ay ilaaliyaan hanaanka diyaargarowga doorashada ,iyadoo la iska ilaalilanayo wax kasta oo keeni kara khilaaf siyaasadeed.
Halkaan ka dhagayso codka Gudoomiyaha PUNSAA.